Hopin: Nzvimbo Yekutenderera Yekutengesa Kubatikana Kune Zviitiko Zvako Zvepamhepo | Martech Zone
Ipo kukiya kwakadzinga zviitiko chaiko, zvakasimudzirawo kugamuchirwa kwezviitiko zvepamhepo. Izvi zvakakosha kuti makambani azive. Nepo zviitiko zvemukati-zvemunhu zvingangodzoka seyakaomarara yekutengesa uye yekushambadzira chiteshi kumakambani, zvingangoita kuti zviitiko zvenguva dzose zvicharamba zvichigamuchirwa uye kuva chiteshi chakakosha futi.
Kunyange mapuratifomu emusangano chaiwo achipa chishandiso chinogona kuitwa kuti uve nemusangano mumwe chete kana mawebhusainari, iwo maturusi anokundikana kupa puratifomu yakazara inosanganisira zvese zvinoitwa ne musangano chaiwo. Shamwari yangu yakanaka Jack Klemeyer akagovana chishandiso icho kambani yake yekurairidza yanga ichishandisa kushandura kubva kumusangano wepagore uri-wemunhu kuenda kune chaicho… Hopin.
Hopin: Iyo Virtual Nzvimbo YeZvako Zvese Zviitiko Zvako
Hopin inzvimbo chaiyo ine nzvimbo dzakawanda dzekudyidzana dzakagadziridzwa kuti dzibatanidze nekuita. Vanopinda vanogona kupinda mukati nekunze kwemakamuri senge chiitiko chemukati-chemunhu uye vanakirwe nezviri mukati nekubatana kwawakavagadzirira.
Hopin yakagadzirirwa kudzokorora chiitiko chemukati-chemunhu, chete pasina zvipingamupinyi zvekufamba, nzvimbo, mamiriro ekunze, kutenderera kwakashata, kupaka, zvichingodaro. NaHopin, mabhizinesi, nharaunda, uye masangano anokwanisa kusvika kune vateereri vavo vepasirese, kuungana munzvimbo imwechete, uye kuita chiitiko chakakura kwazvo pamhepo chinzwe chidiki zvakare.
Hopin maficha anosanganisira
Chiitiko Chirongwa - chii chiri kuitika, riini, uye chikamu chipi chinotevera.
Reception - peji rekugamuchira kana lobby yechiitiko chako. Pano unogona kukurumidza kuziva zviri kuitika pachiitiko pari zvino.
Stage - vanosvika zviuru zana vanopinda vanogona kuenda kumharidzo dzako kana mazwi akakosha. Nhepfenyuro irarame, tamba zvakanyorwa-zvakanyorwa, kana rwizi kuburikidza neRTMP.
muzvirongwa - vanosvika makumi maviri vanopinda vanogona kunge vari pachiratidziri chimwe chete nemazana evapindi vachiona uye vachikurukura muzvikamu zvisina muganho zvinogona kumhanya panguva imwe chete. Yakakwana pamatareti, mapurojekiti, kana hurukuro dzeboka.
Vatauri Rondedzero - kukurudzira ndiani ari kutaura pachiitiko ichi.
Networking - otomatiki musangano wega-wega-kugona kugonesa varipo vaviri, maspika, kana vatengesi kuti vafone.
tauriranai - chiitiko chat, chepamhepo chat, echikamu chats, dumba hurukuro, musangano musangano, backstage chats, uye akananga mameseji ese akabatanidzwa. Meseji kubva kune varongi dzinogona kuiswa uye dzinoiswa pachena kuti zvive nyore kuzivikanwa kubva kune vanopinda.
Exhibitor Booths - sanganisira anotsigira uye anoshanda naye vatengesi matumba uko zviitiko-vanoenda vanogona famba famba kushanyira matumba anovanakidza, kudyidzana nevatengesi, uye kutora matanho. Dumba rega rega pachiitiko chako rinogona kunge riine vhidhiyo mhenyu, yakashambadzirwa zvemukati, Twitter zvinongedzo, pre-yakanyorwa mavhidhiyo, akakosha zvinopihwa, vatengesi pane mhenyu kamera, uye yakasarudzika bhatani maCTA.
Sponsor marogo - marogo anodzvanywa anounza vashanyi kumawebhusaiti evatsigiri vako.
Kutengesa Matikiti - yakasanganiswa tikiti uye yekubhadhara kubhadharisa neStipe mutengesi account
Akapfupisa ma URL - ipa varipo kamwechete-pinda kupinda mune chero chikamu chechiitiko paHopin.
Hopin ndeye yese-mu-imwe chiitiko chikuva chakagadzirirwa kubatanidza maspika ako, vanotsigira, uye vanopinda. Vanoronga vanogona kuzadzisa zvinangwa zvimwechete zvezviitiko zvavo zvekushambadzira nekugadzirisa zviitiko zvavo zveHopin kuti zvikwanise zvinodiwa, kunyangwe iri chiitiko chevanhu makumi mashanu, musangano wevanhu mazana mashanu, kana musangano wemunhu wepagore zviuru makumi mashanu.
Tora Demo reHopin
Tags: chiitiko chatExhibitor dumbahopinMisangano yepamhepozviitiko zvepamhepomazita evataurimutsetsekutengeswa kwetikitimafoni efonichaiko expo
CSV Explorer: Shanda Nemahombe CSV Mafaira